Furitaanka kulankii DF iyo dowlad goboleedyada oo dib u dhacay | KEYDMEDIA ONLINE
Furitaanka kulankii DF iyo dowlad goboleedyada oo dib u dhacay
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa horey u shaacisay in shirkan uu furmayo 10 bisha oo ku beegan maanta oo Khamiis ah, haseyeeshee waxaa muuqato in uu dib u dhacay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa dib u dhaca ku yimid shirkii Dowladda iyo dowlad goboleedyada oo lagu weday in uu maanta oo Khamiis ah ka furmo magaalada Muqdisho sida ay horey u shaacisay Madaxtooyada Soomaaliya.
Madaxda maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa shalay gabal dhicii soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana xalay lagu weday in madaxtooyada lagu qabto kulan casho sharaf ah oo ay Villa Soomaaliya ku casuuntay, balse arrimo jiro awgood ayay wax walbo u baaqdeen.
Inkastoo aysan ka hadlin Villa Soomaaliya dib u dhaca ku yimid shirkaan ayaa haddana waxaa la sheegayaa in weli xal laga gaarin arinta madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland, waxaana ilo lagu kalsoonaa karo sheegayaan in Axmed Madoobe uu dal banayo wax ka qabashada arinta Gedo ka hor furintaanka shirka.
Macaaluumaad ay heshay Keydmedia Online ayaa sheegaya in shirka uu furmi doono maalinta Sabtida, iyadoona inta ka horreyso ay jiri doonaan kulamo ay dhinacyada, kuwaas oo loogu gogol xaarayo xalinta khilaadyada hoose ee jiro.